မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: SIMPLE PLAN in town
SIMPLE PLAN in town
ဘာလို့မှန်းမသိ Simple Plan သီချင်းတွေ အားလုံးနီးပါးကို ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တယ်... အထူးသဖြင့် သူ့သီချင်းတွေကို စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ပေါက်ကွဲချင်နေပင်မဲ့ တိုက်ရိုက်ပေါက်ကွဲလို့မရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့သီချင်းတွေ အော်ဟစ်လိုက်ဆိုလိုက်ရင် စိတ်ပြေသွားတတ်တယ်...
သူ့သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကိုလဲ ကြိုက်တယ်... အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကို သိပြီး လိုက်ဆိုရတာ ကြိုက်တယ်... ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးသီချင်းလေးတွေက Welcome to my life, I'm justakid နဲ့ Untitled ပြီးတော့ Shut up (shut up ကျတော့ အဓိပ္ပါယ်သိပ်မကြိုက်ပင်မဲ့ လိုက်ဆိုလို့ကောင်းလို့ကြိုက်တယ်...) ကာရာအိုကေသွားရင် အဲသီချင်း အမြဲဆိုဖြစ်တယ်... ခုတစ်လောမှ ထွက်ထားတဲ့ Jet lag ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သူဆိုတာမှန်းမသိခင်ကတည်းက ကြိုက်တယ်... သူဆိုတယ်ဆိုတာသိတော့ ငါ Simple Plan ကို တကယ်ကြိုက်တာပါလားလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်သွားတယ်... အရင်ကလဲ သီချင်းတွေကြားရင် ကြိုက်တာပဲရှိတယ်... အဲဒိ သီချင်းတွေက Simple Plan သီချင်းတွေဖြစ်နေတာ နောက်မှသိတာ... Simple Plan ကို ကြိုက်ပင်မဲ့ လူမမြင်ဖူးဘူး... မြင်အောင်လဲမကြိုးစားခဲ့ဘူး... Youtube ကနေ နားထောင်လဲ Lyric တွေပဲကြည့်တော့ သူတို့ပုံတွေကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားမိဘူး...
Jet Lag သီချင်းနားထောင်မှ ငါကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်က ဂျပုလေးပါလားလို့သိတယ်... အဟိ... ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရည်မဆိုင်ပဲ ဂီတသက်သက်ကို ကြိုက်တာဆိုတော့ Simple Plan ကို ကြိုက်တုန်းပါပဲ... Jet lag သီချင်းလေးကလဲ နိုင်ငံမတူပဲ ခွဲနေရတဲ့ ချစ်သူ ၂ယောက် ချစ်တဲ့ လွမ်းတဲ့အကြောင်းကို Cheesy ဖြစ်ဖြစ်ရေးထားတယ် ဆိုပေမဲ့ စာသား အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကို သဘောကျတယ်...
အဲလို အဲလို ကျွန်မကြိုက်တဲ့ Simple Plan စကာင်္ပူကိုလာပြီး ဖျော်ဖြေတော့မယ်... သွားကြည့်ချင်တယ်... အဖော်မရှိဘူး.... ဘယ်သူသွားကြည့်မှာလဲ... အောက်မှာ အဲဒိပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ တင်ပြလိုက်ပါတယ်... လက်မှတ်တွေကို sistic ကနေ၀ယ်လို့ရတယ်...
လက်မှတ်ဈေး (Exclude Booking Fee)
Standard - $109 (ခုဝယ်ရင်), $121(Event Day, အဲဒိနေ့မှ ၀ယ်ရင်)
Early Bird - $99 (နိုဝင်ဘာ ၃၀ မတိုင်ခင်ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်... ခုမရတော့ဘူး)
ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးများနဲ့ ၅နှစ်အောက် ကလေးများ ၀င်ခွင့်မပြု. ၆ နှစ်အထက်ကလေးများ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှ ၀င်ခွင့်ရမည်..
No admission for infant in arms and child aged below5years old. Child6years old and above must purchase ticket for admission.
*ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း ဗွီဒီယို ရိုက်ခြင်း အသံဖမ်းခြင်း မပြုရ
No Photography, Video recording and Audio recording is allowed for this event!
မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင် ကျင်းပပြီး အမိုးအကာမဲ့ Free Standing ဖြစ်သည်...
ဘူကြည့်ချင်လဲ??? အိမ်ပြန်ရောက်မှ youtube က သူတို့သီချင်းတွေ ပိုစ့်မှာထည့်ပေးမယ်..
Posted by mabaydar at 4:57 PM
Labels: Star in town
fan of simple plan said...
I like simple plan also. I want to go.
Where can buy tickets? SISTIC?
12/08/2011 12:33 AM
Cannot go aldy.Working night shift. And no leave left.OMG! why all concert on Sunday?
12/08/2011 12:37 AM
ရောက်တက်ရာရာ (၂) ...
Scariest Roller Coaster I've ever ride (or) Japan ...
Branded ရေမွှေး sale, L'oreal Sale
လီဒေါင်ဝုနဲ့ ကင်ဆွန်အ ကိုတွေ့ချင်တယ်.................